Shirkii Madaxda Africa oo la soo afjarey (Maxaa ka soo baxey?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirkii Madaxda Africa oo la soo afjarey (Maxaa ka soo baxey?)
3rd September 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com: Waxaa shalay magaalada Nairobiee dalka Kenya lagau qabtay shir looga hadlayArgagixisada Qaarada Afrika, kaasoo uu soo qaban qaban qaabiyay Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika.
Shirkaan oo uu martigeliyey madaxweynaha Kenya, Uhuro Kenyatta, waxaa ka qeyb galay madaxweyneyaasha dalalka Kenya, Nigeria, Chad, reysul wasaaraha Aljeeriya iyo madax ka socotay dalalka Liibiya, Koonfur Afrika, Itoobiya iyo dalal kale.
Shirkan ayaa waxaa dowlada Soomaaliya uga qeyb galayay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxana mid ahaa wasiirka arrimaha dibada C/raxmaan Ducaale Beyle, taliyaha hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka C/laahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) iyo wasiirkii hore ee amniga qaranka C/kariim Xuseen Guuleed.
Shirka ayaa waxaa sidoo kale goob joog ahaa safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur (Ameriko), qunsulka safaarada Soomaaliya Siyaad Maxamuud Shire iyo xoghayaha koowaad ee safaarada Cali Maxamed Sheekh (Cali Begadi)
Shirkan looga hadlayay argagixisada qaarada Afrika iyo qalalaasaha ka dhanka ah figradaha mayal adeyga waxaa shir gudoominyay madaxweynaha dalka Chad, Idriss Déby oo ah gudoomiyaha golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika.
Shirkan ayaa waxaa khudbado ka jeediyay madaxweynaha dalka Nigeria, Goodluck iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxana ay hoos ka xariiqeen muhiimada ay leedahay in wadamada qaarada Afrika ay iska kaashadaaan sidii loola dagaalami lahaa, loona cirib tiri lahaa qolooyinka mayalka adag ee ka soo ifbaxday qaarada.
Shirka ayaa sidoo kale lagu bandhigay warbixin laga soo diyaariyay xaaladaha waxa loo yaqaano aragagixisada ee qaarada Afrika, iyadoona laga dooday, kadibna la isku raacay.
Wakiiladii ka kala socday ururada IGAD, IOC, EU, UN, Jaamacada Carabta iyo dalalka USA, France, Rassia, China iyo UK ayaa sheegay in ay wadamada qaarada Afrika ka taageeri doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxahaas.
Shirka ayaa daba socdo kulan dhowaan madaxda Midowga Afrika ay ku yeesheen magaalada Addis-ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Shirka ayaa ku soo beegmay iyadoo qeybo ka tirsan gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ay ka billowdeen howlgallo milateri oo ka dhan ah malleeshiyada Al-Shabaab.
Howlgallada milateri waxaa si wada-jir ah u wada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Dowladda Soomaaliya oo 45 maalmood u qabatay Alshabaab